အသက်ရှင်နေထိုင်သို့မဟုတ် Die: ရှင်သန်မှု (Live or Die: survival)
အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူ, ငါတို့သည်သင်တို့အသေကောင်မဟုတ်ပါဘူးဝမျးမွောကျနေပါပြီ! ကျနော်တို့အနည်းဆုံးကမျှော်မှန်းထားသည်အခါကမ္ဘာပျက်ကျွန်တော်နှင့်အတူကျန်ခဲ့ပါတယ်အားလုံးရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာရှင်သန်ရပ်တည်ရေးသည်မသေဘဲကျန်ရစ်သူ လာ. ...
ကမ်ဘာပျေါမှာအအောင်မြင်ဆုံး FPS ဂိမ်းတစုံတပါးကဲ့သို့, CrossFire ၏မိုဘိုင်းဗားရှင်းဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းကနေစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအာရုံကိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ဆုံး Survivor: အသကျရှငျနေပါ (The Last Survivor : Stay Alive)
The Grand ကြည်းတပ်: Zombie Survival (The Grand Army: Zombie Survival)
ရုံရာဇဝတ်သား (Just Outlaws)
RPG element တွေကိုနှင့်အတူဖို့ "ပဲရာဇဝတ်သား" လုပ်ဆောင်ချက်တစ်ခုမျှော်စင်ကာကွယ်ရေးမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ ဒီနေရာတွင်ကွဲပြားခြားနားသော Special အတူအစွမ်းထက်, ဒါပေမယ့်ဒါသူရဲကောင်းမဟုတ်ဇာတ်ကောင်ကိုထိန်းချုပ် ယူ. ဖုတ်ကောင်များ၏အလုံးအရင်းချွတ်တိုက်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။
စစ်ဆင်ရေးလွတ်မြောက်ရေး (Operation Freedom)
"စစ်ဆင်ရေးလတ်ြလပ်ခ - ထို Fittest ၏ Survival" အမြင့်ဆုံး 40 ကစားသမားလက်တွေ့ကျကျတိုင်းဂိမ်းအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ထောက်ခံပါတယ်, တစ်ဦးလွန်ကဲကဲ multiplayer ရှင်သန်မှုမိုဘိုင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မိုဘိုင်းစစ်: Frontline (Mobile Battleground: Frontline)
မိုဘိုင်းစစ်: Frontline ဆန်းသစ်ထိန်းချုပ်မှုနဲ့အွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းသေနတ်သမားဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အပြည့်အဝ 3D POV နှင့်ရိုးရာအွန်လိုင်းစစ်ပွဲကစားကွင်းထက်ရိုးရှင်းတဲ့ပိုပြီးပျော်စရာထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူ, သင်မှန်က start ကနေဂိမ်းကျွမ်းကျင်နိုငျပါသညျ!
လုပ်ကြံ Netease Self-ဖွံ့ဖြိုး 2.5D ရှုထောင့်နည်းဗျူဟာမိုဘိုင်းဂိမ်းစျေးမှာ! ရယ်စရာနှင့်ဇာတ်ဆောင်စတိုင်ချောမွေ့ချောမွေ့ပစ်ခတ်မှုချောမွေ့ချောမွေ့ဂိမ်းကစားခြင်းအတွေ့အကြုံကို
mega သေနတ်သမား: Infinity အာကာသစစ်ပွဲ (က Galaxy သူရဲကောင်းများ) က၎င်း၏အလွန်ထူးခြားတဲ့ဂိမ်းကစားအတူ em တစ် 2D နေရာလွတ်သေနတ်ပစ်ခတ်မှုဂိမ်းစတိုင်ရိုက်ကူးတက်သည်။ အခွအေနေအသင်္ချေစစ်ဆင်ရေးအတွက်အစာရှောင်ခြင်းပွေးညီအရေးယူသေနတ်သမားဂိမ်း!